Faahfaahin: Howlgalkii lagu qaarajiyey Hoggaamiyihii kooxda Daacish (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home NEWS Faahfaahin: Howlgalkii lagu qaarajiyey Hoggaamiyihii kooxda Daacish (Sawirro)
Faahfaahin: Howlgalkii lagu qaarajiyey Hoggaamiyihii kooxda Daacish (Sawirro)
Hoggaamiyihii kooxda Daacish ayaa lagu dilay howlgal xalay ka dhacay gobolka Idlib ee waqooyiga galbeed ee Syria, waxaa sidaas maanta ku dhowaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
Weerarka ayaa lagu beegsaday Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, oo hoggaanka kooxda mintidiinta ah la wareegay 31-kii October 2019, maalmo un kadib markii hoggaamiye Abu Bakr al-Baghdadi uu ku dhintay howlgal ay Mareykanka ka fuliyeen isla aagaas.
Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in al-Qurayshi uu u dhintay si la mid ah Al-Baghdadi, isaga oo isku qarxiyey bam dilay isaga iyo xubno ka mid ah qoyskiisa, oo ay ku jiraan haween iyo caruur kadib markii ay kusoo siqeen ciidamada Mareykanka.
Waxaa sidoo kale loo yaqiin Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla.
Howlgalka ayaa yimid xilli ay Daacish isku dayayeen inay dib usoo laba kacleeyaan, ayaga oo weeraro dhowr ah ka fuliyey gobolka.
Ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ayaa kusoo degay diyaarado helicopter ah, waxayna weerareen guri ay Daacish ku laheyd Syria, ayaga oo iskudhac socday laba saac uu dhex-maray koox hubeysan, sida ay sheegeen goobjoogeyaal.
Dadka deegaanka ayaa sheegay is-rasaaseyn xoogan iyo qaraxyo aad looga maqlay magaalada Atmeh oo ku dhow meel ku dhow xuduudda Turkey, oo ay ku yaallaan xerooyin ay ku jiraan dad kusoo barakacay dagaalka sokeeye ee Syria.
Kooxaha gurmadka deg degga ah ayaa sheegay in 13 qof lagu dilay iska hor-imaadka, oo ay ku jiraan lix caruur iyo afar haween ah.
Madaxweyne Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu amray weerarka “si uu ilaaliyo shacabka Mareykanka iyo xulufadeena ugana dhigo dunida meel amni ah.”
“Ayada oo ay ku mahadsan yihiin ciidamadeena geesiyada ah ee xirfadda leh, waxaan goobta dagaalka ka saarnay Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi – Hoggaamiyihii Daacish,” ayuu Biden ku yiri bayaan uu soo saaray.
Previous articleUS raid in Syria killed top ISIS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi
Next articleQarax & Dab qabsaday Markab sida shidaal gaaraya Malaayiin fuusto (Sawirro)
Xulka Qaranka Somalia oo loo Magacaabay Macalin cusub oo ajnabi ah (Sawirro)
War cusub oo laga soo saaray ninkii weerarka ka fuliyey Suuqa Copenhagen
Go’aammo kasoo baxay Kulan Dhex Maray Muuse Biixi iyo Ergedii Is Xilqaantay (Sawirro)
Cabdi Cade - June 23, 2022
An unprecedented fourth failed rainy season with catastrophic hunger, disease and displacement has forced Somalia into a climate crisis, the Norwegian Refugee Council’s Secretary...
Somalia: Evidence of unauthorised fishing by EU vessels in indian ocean coastal states’ Waters